June 27, 2020 - Online Media
राजुलाई मार्ने दुस्मन को हो ? यो दुस्मनको रूप, स्वरूप कस्तो छ ? युग पाठक यो लेख धेरैपटक बुन्दाबुन्दै उधारियो । पछिल्लोपटक उधारिँदा भेरीको किनारमा उभिएको थिएँ म र भेरीको प्रवाहमा बगेका मेरा आँखा फर्किएकै थिएनन् । नवराज विकसहित ६ जना झरिला युवाहरूको हत्या गरेर फालिएको नीलो प्रवाह । तीन हप्तापछि पनि मान्छे यहाँ पौडिन डराइरहेका थिए । माछा मार्न जाने हिम्मत परेको थिएन कसैलाई । यतिवेला फेरि उधारिँदै छ यो लेख र राजु सदाको छटपटी आँखामा तारन्तार बगिरहेको छ । लेखक सिर्जना ढकालले भर्खरै ट्विट गरिन् : राजु सदाहरूले यो देशलाई देश किन भन्ने ? चिहान किन नभन्ने ?
Arts, Headline, Life Style, News, Politics, Research, Thoughts No Comments »
दक्षिण कोरिया/शौल । गायक सुर्य रुम्बाको ‘दुई शब्द’ बोलको गीत बजारमा आएको छ । उक्त गीतले दुनियाँलाई मोहित पारेको हो । शुक्रबार अफिसियल रुपमा गीतलाई रिलिज गरेको थियो । गायक सुर्य रुम्बाको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीतमा चर्चित मोडल एंव निर्देशक हेरुका लामा र मोडल निराञ्जली लामाले अभिनय गरेका छन भने प्रतिक थापाको संगीत संयोजन रहेको छ । भिडियोलाई बिशाल राज राईले निर्देशन, राम कुमार के सि ले छायांकन, टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका हुन । उक्त भिडियोमा चर्चित निर्देशक एंव मोडल हेरुका लामा र निराञ्जली लामाको उत्कृष्ट अभिनय देख्न